Dambiile Jwxo-shiil: ONLF Absame Ayey Taageero Uga Baahan Tahay – Rasaasa News
Dambiile Jwxo-shiil: ONLF Absame Ayey Taageero Uga Baahan Tahay
Apr 6, 2010 Jwxo-shiil, ONLF, south afrika
“Umuli wax ka ilowsho dhaw” Jwxo-shiila aqli waa ka intaad aragtaan, saa waaba ka afka ku balaadhiyey Absamow I taageer, waxaa uu moog yahay in Absame uu Isaga dartii u midoobay, hadii uu awood yeelan lahaana uusan waligii meel Absame joogo soo fadhiisteen.
Ururka ONLF, afartiisa eray, erayga ugu horeeya ayaa u taagan beel ka mid ah beelaha Absame, eraygaas oo u taagan ayaa aad loogu yaqaan dhulka somalida ee ay Itobiya haysato.
Itobiya ayaan iyadu sharciyad fiican u haysan in ay gumaysato Ogaden, balse waxaa u sahla in Itobiya ay abid haysato itaal darida ummada gayigaas ku abtirsata. Saddex kacdoon oo la doonayey in Itobiya laggaga fara bixiyo gayigan ayaa ka dhacay dhulkan, kuwaas oo laga dhaxlay khasaare balaadhan. Kacdoonadaasi waxay kala wateen magacyo kala duwan, laakiin hal ujeedo ayey lahaayeen, waxaana ugu dambeeyay ururka ONLF, oo uu Jwxo-shiil ka adeegay.
Ururka ONLF, oo halgan waday tan iyo 1991, ayaa ah kacdoonkii ugu cimriga dheer, waxaana taageerayaashiisu ay ahaayeen beesha Ogadeen, oo ay dhibaato xoog lehi ka soo gaadhay kacdoonkan. Beelaha kale sababta ka reebtay halganka wali ma cada, wayse diideen waxaana diidmada saldhig u ahaa magaca ONLF. Ururkan ONLF ayaan u teelo dhiganin la tashiga beelaha gayigan, kuna guuldaraystay xitaa in uu wax ka dhaadhiciyo beesha Absame.
Hadaba, sida aan maqalay Jwxo-shiil, oo ay ummada Somalida Ogadeeniya ka cawdu bilaysato, ahna ninka burburiyey halgankii ay Ogadeenku kalida ku ahaayeen kuna heshiin waayeen. Jwxo-shiil oo masuul ka ah burburka ururka ONLF, diidayna talooyin badan in badan ay u jeediyeen wax garadaka ummada Somalida Ogadeeniya ayaa eegga uun indhaha furay.
Jwxo-shiil, ayaa codsaday in uu la kulmo Jaaliyada beesha Absame ee South Afrika, ka dib kolkii uu ku guul daraystay in uu helo dad taageersan kooxda Jwxo-shiil. Kulanka uu la yeeshay Jaaliyada Absame iyo adeerkood ee South Afrika, ayaa ahayd mid hadii ay ceebi jirto uu Jwxo-shiil ku ceeboobay. Jwxo-shiil, waxaa uu waydiista Jaaliyada Absame in ay taageeraan kooxdiisa madaama ayna jirin wax gacan ugu jiraa, jawaabta la siiyey Jwxo-shiil ayaa ahayd ONLF, haday burburtay adiga ayaa burburiyey waxbana kama qaban karo.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa iyagu todobaadkii hore qorayey in ay shirar ku qabteen South Afrika arintaas oo ayna waxba ka jirin, waxaana markhaati u ah kulanka uu Jwxo-shiil, la yeeshay madaxda Jaaliyada Absame ee South Afrika, kolkii uu wax kale waayey.
Jwxo-shiil, waligii meel kasta oo uu tago lama kulmin Jaaliyad Absame, xitaa waxaa uu diiday odayaal Ogadeen ah oo damcay bal in ay kala hadlaan dhibaatada uu samaynayo, waana kii diida dhawr iskuday.
Arimaha kooxda Jwxo-shiil
Jwxo-shiil oo Meel Walba Laggaga Adkaaday
Macalin Diirane oo Mar Kale Doxa u Dusay, Tolow Maxaa Kaga Dabran?